रुपा गाउँपालिकाकाे बजेटमा बाँदर लखेट्न १० लाख ! — samadhannews.com
कास्की, २८ आषाढ:
बाँदरले सताएपछि कास्कीबाटै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको खबरले गएको वर्ष बजार ताएको थियो ।
कृस्ती नाच्नेचौरका ६० वर्षीय ठाकुरप्रसाद सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका थिए । बाँदरले खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली र फलफूल खेतीमा क्षति पुर्‍याउँदा पनि सरकार रमिते बनेको उनी लगायत किसानको गुनासो थियो ।
किसानको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले बाँदर धपाएर नियन्त्रण नगरेको विषयमा सरकारलाई लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्न नपर्ने हो ?’ लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थिए ।
मुद्दा दिएका किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएका थिए ।
अहिले सबैजसो गाउँका किसान बाँदरबाट आजित छन् । बाँदर आतंकले हैरान त्यस्तै किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक रुपा गाउँपालिकाले भने बजेट नै विनियोजन गरेको छ । किसानलाई बाँदरले धेरै सताएको गुनासोपछि मंगलबार भएको रुपा गाउँपालिकाको गाउँ भेलाले बाँदर नियन्त्रण गर्नकै लागि १० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत बाँदर नियन्त्रणका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइपछि यो विषय रोचक बन्यो ।
‘गाउँका किसान बाँदरबाट अजित भएका छन् । बाँदरले नालीबालीदेखि फलफूलसमेत खाने तथा नष्ट गरेर हैरान परेको गुनासो धेरै आयो,’ रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘बाँदर नियन्त्रण तथा विस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हौं ।’
गाउँले सहर केन्द्रित हुँदै गएर खेती योग्य जमिन बाँझिँदै जाने र वन, जंगल बढ्दै गएपछि गाउँका किसानलाई बाँदरले घरसम्मै पुगेर सताउने गरेको रुपा गाउँपालिका वासी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्की अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले बताए ।
गाउँपालिकाले बाँदरलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ त ? गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले भने, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जमा पु¥याएर छाड्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा सहकार्य गर्ने र भारतबाट बाँदरविज्ञ प्राविधिकलाई ल्याएर काम गर्ने योजना बनाउँदै छौं ।’
बाँदरलाई कसरी नियन्त्रण गरेर किसानलाई राहन दिन सकिन्न भन्ने विषयमा समिति बनाएर कार्यान्वयन गरिने अध्यक्ष ओझाले जानकारी दिए ।
बादर कारणले किसानले खेती गर्न छाडेपछि जमिन बाँझिदै रुपा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भेषराज आचार्यले बताए । ‘किसानले खेती गर्न सकेनन् जमिन बाँझिदै गयो । त्यसैले बाँदर नियन्त्रण गर्न किसानका निम्ति बजेट छुट्याएका हौं,’
कार्यकारी अधिकृत आचार्यले भने । गाउँपालिकाले बजेट नै छुट्याएपछि बाँदरबाट आजित किसानले राहत महसुस गरेका छन् ।
गाउँपालिकाले बाँदर आतंकलाई लक्षित गर्दै किसानका पक्षमा बजेट नै छुट्याएपछि कार्यक्रममा उपस्थित किसानले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।